Last updated: May. 23 2019 | 3 min akhri
Dadka San Francisco waa romantics dhabta ah; ay u ogaadaan sida ay u soo noqdaan taariikhda ah oo wuxuu galay taariikhda kaamil ah. Si kastaba ha ahaatee, meelahoodii badan oo waa weyn si ay u tagaan oo ku saabsan taariikh magaalada, waa adag tahay in qalad la qorshaha shukaansi aad. Qaybta hoose wadahadalo ku saabsan sagaal taariikhaha qof kasta oo kabo San Francisco on tago.
1. kortaan A on Magic Bus SF
Magic Bus idiin qaadan doonaa on a 90 safarka daqiiqadii meelaha psychedelic of San Francisco. Inta lagu guda jiro this safar multimedia oo xiiso leh, waxaad ka heli doontaa in ay ka markhaati la hadlay oo ku saabsan wax badan oo dhaqanka Hippie oo badan, wak- kale sida ee 1960. Socdaalkan waxa uu siin doonaa adiga iyo lammaanahaaga riteen of xasuus aad labada xumme.
2. iyada qaad Beach Ocean
Haddii lamaanahaaga waa enthusiast dibadeed, ayay hubaal meeshan jeclaan doonaa. Ocean Beach waxa uu ku yaalaa meel u dhow State Golden Park; waqtiga aad halkan ku qaataan doonaa uu noqon doonaa oo xiiso leh iyo madadaalo ka buuxo. Ka qaybqaado hawlaha sida duulaya iyo faragooysta caynkeeda a, tug, iyo baaskiilka; ka dibna si wadajir ah ku qaataan qaar ka mid ah saacadaha nasashada ee ka badan hal galaas oo is biirsaday aad jeceshahay.
3. Tag kalluumaysato ee Wharf, waayo taariikhda quraac
Kalluumayste ee Wharf weli ah mid aad dadku ku dhowaad dhammaan maalintii; Si kastaba ha ahaatee, haddii aad maamuli kartaa in aad soo booqato meel ka hor 9 a.m., Sida xaqiiqada ah waxaa ku siin doonaa tacsiyaynta adiga iyo lammaanahaagu u ooman yihiin.
Aad quraac ah oo kulul, hubi libaaxyo badda baxay iyo sida maalinta socdo waxaad tagtaa Pier ah 39 waayo, qaar ka mid ah shopping. Si aad u taariikhda yar oo dheeraad ah oo xiiso leh, waxa kale oo aad qaadan kartaa kortaan baabuur cable ka kalluumaysato ee Wharf Midowga Square.
4. baaskiil dhex Area Baay
Haddii ay taariikhda dhicid, tag masaafo baaskiil si Bay Area SF ah. Wax kasta oo aad la kulmi doonaan yeelan doonaan taabashada ah hindiga; ha noqoto midabada, neecaw ama urta caleenta ah.
5. Tag, waayo, taariikh movie gaar ah
Halkii socda for a movie joogto ah taariikhda, madaxa si Castro Tiyaatarka, Daar movie damaashaaday iyo mid ka mid ah dalka durkiya taariikhi ugu caansan ee San Francisco. Other ka badan marti movies repertory iyo ciidaha film, waxa ay sidoo kale yada kala duwan oo ka mid ah dhacdooyinka gaarka ah.
6. Waqti dhowr saacadood ee Forbes Island
Waxa kaliya oo aan ka heli kartaa more jaceyl ka badan this; booqo Forbes Island la jecel yahay iyo sida xaqiiqada ah waxaad yeelan doontaa qaar ka mid ah taariikhda post Xusuus weyn.
naagtaada ama gabar saaxiib weydiiso in ay keenaan jaakada iyada ula macaamiloodaa sida neecaw ah inta badan waa soo jiidasho leh qabow halkan. Haddii aad illowdo in aad iyada xusuusiyo, ha ka welwelin; bixiya aad jaakad ama jaakad duq ah, Laakiinse jidka runtii macaan ee samaynta dumarka dareemaan jecel.
7. Qorsheyso geeyo buufin hawada kulul
qorrax Witness ee San Francisco ka buufin hawada kulul; doonistii gacaliyahaagii hubaal waa in la wacdaro la doorashadaada adventurous. Tani waa fikrad fiican shukaansi dabaal munaasabadaha gaarka ah. End kulan la hadhuudh ah oo weyn iyo rooti Champagne ah.
8. Safarka A si Crissy Field
Crissy Field kuu soo bandhigi doonaa fursadaha kala duwan si ay u soo noqdaan kulan caadi ah galay taariikh jaceyl. Meeshu, oo mar u noqon a Airporka Army US isticmaalo, ayaa hadda lagu daray Golden Gate National Recreation Area ah.
At Crissy Field, aad duuli karo iyo faragooysta caynkeeda a, leeyihiin koob bun ah ee cafe u dhow, ama ku qaataan qaar ka mid ah saacadaha xasilloon la lamaanahaaga daawashada hirarka tartiib hartay iyo muuqaal ah breathtaking xeebaha.
9. Tag socod Sallaan
Tani waxay u muuqan kartaa inaad fikrad shukaansi aad u sahlay, laakiin marka aad ku sugan tahay San Francisco Sallaan socod hubaal waa ikhtiyaar waa-isku day shukaansi. Magaalada guriga waa in tiro ka mid ah jaranjarooyinka gaar ah iyo xarrago; badan oo jaranjarooyinka, kuwaas oo ku yaalaan meel fog oo ay sabab u leeyihiin backdrops quruxsan taataabtay. Laba jaranjarooyinka SF in loo sameeyo baro shukaansi waaweyn yihiin Tallaabada Lyon Street, iyo 16 Avenue Talaabooyinka Tile.
Kuwaasu waxay ahaayeen sagaal taariikhaha qof oo ku nool San Francisco waa in aan marnaba ka maqnaan socday. Waa maxay waaweyn ayuu iyaga ku saabsan waa in aadan u baahan doontaa inaad ku bixisaan kun oo dollar wax ka mid ah taariikhaha kuwan, laakiin weli waxaad ka heli doontaa in qaar ka mid ah waqti xusuus iyo dareen la lamaanahaaga qaataan.